UMDLALO WEZIHLALO ZOBUKHOSI UPETYR BAELISH - @IQOSWEB
Hamba ngokuthambileyo kwaye uphathe i-Littlefinger: I-Ode ukuya kwiMidlalo yeTrone 'uPetyr Baelish
I-Vile, idelelekile, intle kwaye iyothuka. La ngamagama onke endiwabonile esetyenziselwa ukuchaza u-Lord Petyr Baelish, oboniswe ngu-Aidan Gillen kwi-HBO's Umdlalo weTrone s. Kuqikelelo lwam, nangona kunjalo, akukho nto inomdla ngakumbi kunendoda enobukrelekrele, kwaye ngokuqinisekileyo uPetyr uneengqondo ezininzi zokuzikhusela. Yintoni ekhuthaza u-Lord Baelish ukuba abe ngoyena mntu ushukumayo kwezopolitiko kwaye angcangcazelele? Kwaye kutheni isimilo nje abantu abaninzi bathanda ukuthiya-okanye ukuthiya ukuba bayathanda?
Ukujonga ngeenxa zonke kwi-Intanethi, kukho iinkampu ezithile ezichasene nePetyr. Ngokuqinisekileyo, akathandiswanga njengoJon Snow okanye uRobb Stark, kwaye engathandwa ngobukrelekrele nobuqili bakhe njengoTyrion Lannister. Abantu abayixabisayo i-Petyr babonakala ngathi bangabathandi-abathandi, banikina iintloko zabo kwaye bencumile kuba ulungile ukuba abe nobubi. Kwaye emva koko, njengoCersei Lannister, udeliwe ngokupheleleyo ngababukeli abaninzi ngenxa yokuhamba kwakhe ngenkani kwezopolitiko kunye namaqhinga athandabuzekayo.
Nangona kunjalo, ndifumana isimilo sikaPetyr Baelish sesinye sezona zinamandla kolu thotho. Ingqondo yakhe yesitayile ayinasiphako, i-monologues yakhe ivuza ngobuciko, ubuqhetseba bakhe abunanto iphosakeleyo- kwaye ezi zinto zisebenza kunye ukwenza umlinganiswa ongoyena mdlali onomdla kakhulu kumdlalo weetrone. Isiphithiphithi sakhe esidumileyo yintetho yeleli emchaza njengomlingiswa. Apho abanye bayasilela kwaye basilele, uPetyr ufumana ukunyathela kwakhe kwaye anyuke nangaphezulu. Uyazi ukuba yintoni eyinyani kwaye yintoni engekhoyo, kwaye usebenzisa olu lwazi ukuzitsalela ngaphambili kwabanye.
Ngenxa yokuba uPetyr uvela kwisiqalo esithobekileyo-wazalelwa kwindawo encinci kakhulu ngaphakathi kweVale yaseAryn, kwaye wakhuthazwa njengewadi yiTullys- ngeendlela ezininzi ngumntu ozenzileyo othembele kubuchule bakhe kunye nenkuthazo Ukufumana isikhundla kwezopolitiko kunye nobukho. Uye kude aye kuthatha eyakhe i-sigil-i-mockingbird-leyo yomfuziselo womntu ozenzele yona, kunye nokujongela phantsi abo bazelwe phantsi kwesigil. Kuba uPetyr uvaliwe kude nothando kunye nokwamkelwa kokona kunandipha ebomini ukusukela ngexesha lobuntwana bakhe, ufunde ukuthembela kuye kuphela. Ngapha koko, ndingaphikisana nokuba yeyokugatywa kukaPetyr athe wajongana nayo ebomini bakhe bonke aphuma kubo ukuze aphumelele.
Ukulahlwa kwakhe okokuqala, ngandlela thile, kuyise wamthumela ukuba aphile njengewadi yeeTullys. Ngelixa aphathwa kakuhle ngabo, usakhunjuzwa mihla le ukuba akalunganga njengooTully. (Oku kungqinwa ngegama lesidlaliso elithi Littlefinger, alinikwa nguEdmure Tully ngokubhekisele kubambiso oluncinci losapho lwakhe kwaye mhlawumbi nesiqu sakhe esincinci ngokunjalo.) Uphakama ngaphezu kokugculelwa nokuzingisa, aze ekugqibeleni athandane noCatelyn Tully.
Kwaye kwakhona, uPetyr ujongene nokwaliwa. Xa efumanisa ukuba uCatelyn utshatelwe nguBrandon Stark, uPetyr ngaphandle kwengcinga yesibini uthatha indoda yakhe endala, enkulu, kwaye waphantse wasweleka kule nkqubo. Kodwa endaweni yokuba loo nto imoyise, uPetyr endaweni yoko usebenzisa amava njengeyona nto ibalulekileyo ebomini bakhe bonke. Kwaye ngelixa engazange ayeke ukuthanda uCartn, nangona eqhubeka elahla inkqubela yakhe, uzenzela indima kwezopolitiko eWesteros apho yena, indoda yelungelo lokuzalwa eliphantsi, esiba ngumntu ophambili.
umfanekiso we-100 yeedola
U-Petyr uyakwazi ukuziqhubela phambili ngokufumana ukunconywa (kunye nokudumisa) udadewabo ka-Catelyn uLysa, kwaye nasemva kokuba etshatile kubantu abazizityebi kakhulu (nangaphezulu kakhulu) uJon Arryn, usamthanda uPetyr kwaye usebenzisa isikhundla sakhe eluntwini (kwaye umyeni wakhe) ukunceda uPetyr anyuke ileli yezopolitiko. Ekugqibeleni, ubukrelekrele bakhe obunamandla kunye nokukwazi kwakhe ukuba nemali kumnika isikhundla kwiKhansile yeKing encinci, njenge-Master of Coin. Ishishini lakhe njengeshishini njengomnini kunye nomqhubi weebhulorho ezininzi eKing's Landing inceda uPetyr enze ubutyebi obakhe.
Ukuphakama kwakhe emandleni kuyamomeleza njengomdlali wepolitiki, kodwa ngeendlela ezithile kuyamomeleza njengomntu. Kwinqanaba elithile, uthando belukhawuleza kuye ebomini bakhe, lube yinto engekhoyo. Oku kuyayitshintsha ukusuka kwinkwenkwe yethenda eyayithanda uCatelyn Tully ukuya kwezopolitiko engenanceba. Akasadlala kakuhle uPetyr nabo bamalayo.
UJon Arryn kunye noNed Stark abalwamkeli uncedo lukaPetyr kwaye baya kuye ngokuchasene nendima yabo njengeSandla seKumkani, isigqibo esiphela kakubi kubo bobabini. URos, ihenyukazi laseWinterfell awaliqesha kuqala njengentombazana esebenzayo aze emva koko aphathise ukusebenza kweendawo zakhe zoonongogo, ufunda kade kubunyani babo bamngcatshayo. ULysa Tully, awatshata naye ekugqibeleni, uba sisikhumbuzo esibuhlungu ngento eyenzekayo xa abantu behlasela oko uPetyr akuthandayo.
Oko kusizisa eSassa Stark. Kucacile ukuba ku-Petyr, ungumfanekiso ombi kanina, uCatelyn wakhe othandekayo. Kwakukho umbono wokuba, ngaphandle kwako konke ukoyikeka awakunyamezelayo ezandleni zikaKing Joffrey, uPetyr wayelinde emaphikweni, efihle ngasemva kwamakhethini, engaze avumele nantoni na ukuba ihambe kakhulu. Kungenxa yeSansa apho sifunda inkalo ebaluleke kakhulu yobuntu bukaPetyr- ngelixa izizathu zakhe zopolitiko zikhulu, ngaphakathi kuye, yimvakalelo yokuhlonitshwa engenakukhanyela.
Ngayo yonke le nto, uPetyr uhamba phakathi kokuzinikela kukatata kunye nomtsalane ongenakuphikiswa eSansa. Yinxalenye yomtsalane yale nxaki ebonakala ngathi ayisiyonto Imidlalo yeethrone ababukeli kakhulu; Kwelona nene isimilo sakhe sabizwa ngokuba sisiphoso, kwaye okona kubi kuye kwathiwa ngumntu ohamba kakubi ngokwesondo. Andivumelani noku ngezizathu ezimbalwa. Okokuqala, uPetyr akaziphathi ngokude ngendlela ecekisekayo njengamadoda afana noCraster, othatha iintombi zakhe njengabafazi, okanye uWalder Frey, onguyisemkhulu nothe watshata umfazi omncinci njengoSansa.
Kwaye kubalulekile ukukhumbula oko Imidlalo yeethrone icwangciswe kwilizwe elifana nelixesha eliphakathi- ukujonga emva kwelo xesha kwimbali yethu kuya kubonisa ukuba umahluko wobudala phakathi kweSansa kunye noPetyr ngekhe uthathwe njengokungaqhelekanga (umzekelo, iNkosazana uEmilia waseSaxony wayetshatile eneminyaka eyi-16. kuGeorge the Pious, Margrave waseBrandenburg-Ansbach xa wayeneminyaka engama-48.) Ungasathethi ke, umakazi ka-Sansa uLysa wayetshate neNkosi endala uJon Arryn, owayesele ecingelwa ukuba yindoda endala xa betshata. Kwaye, kuthathelwa ingqalelo ukuba iSansa, kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo, itshatele kwi-Tyrion Lannister endala kakhulu, kuyacaca ukuba umahluko wobudala ababukeli ababonakala bewufumana bephazamisa ngokwenene ayisiyonto inkulu kwilizwe laseWesteros.
Ke ngoko, uthando olukhulayo u-Petyr uziva ngalo kwiSansa ayizukuchasana nokuziphatha koluntu; eneneni, ubona uCatelyn kuye. Endaweni yokuhlangana nokwaliwa ezandleni zikaSansa, nangona kunjalo, ujongwe nguye njengegorha elithile, into yomsindisi, kwaye ubudlelwane ababenzayo buyabomeleza bobabini. Ngeendlela ezininzi, into eyonyamezelwe nguSansa imenze ukuba afane noPetyr kunokuba esazi - uyaziqonda izithunzi ezingwevu eziphakathi kwayo yonke into emnyama nomhlophe, kwaye uyazi ukuba emva kwayo yonke injongo elungileyo kukho izizathu.
Apho umlinganiswa kaPetyr eguqukela kokulandelayo kukuqagela kwakhe nabani na, kodwa ndingathanda ukumbona ephuma ngaphezulu komdlalo. Usebenze nzima kakhulu ukuba eve ubunzima obufanayo njengabalinganiswa abaninzi phambi kwakhe, kwaye ngekhe kumenze ukuba anqunyulwe intloko okanye abaleke okanye agqobhozwe ngotolo entliziyweni. Kwaye ngelixa ndingekho phantsi kokukhohlisa ikamva lakhe likhanya ngakumbi kunayo nayiphi na enye Imidlalo yeethrone , kuyonelisa ukumbona ephumla kwitrone yentsimbi xa konke kusenziwa. Abanye banethemba lokuba ekugqibeleni ufunda ukuthanda, kodwa ukumbona esenza inguqu efana ne-Scrooge kuya kuba yinto encinci kum. Andikwazi ukucinga ngaphandle kokuncwina, i-wink kunye ne-sarcastic wit-ndiyayithanda iNkosi yam iBaelish ngakumbi kwicala laseMacavavellian.
UStephanie Clark ngumbhali ohlala ehlathini kumantla eNew York. Uhlala nabantwana bakhe abathandekayo, kunye neekati ezine, izinja ezimbini kunye nehamster enye. Uyakonwabela ukubukela nokufunda zonke izinto zesayensi kunye nefantasy, kwaye ungumqokeleli onomdla kaGqirha Ngubani noMdlalo weTrone tchotchke. Xa engazibhalisi okanye esenza umsebenzi wobugcisa, uyalonwabela ivolontiya kunye nenkonzo yoluntu, ngakumbi kwicandelo lezemfundo. Unga funda ngakumbi ngomsebenzi wakhe apha .
Uwilly Wonka Kunye Nomzi Mveliso Wetshokholethi
iindudumo kunye nemibane 52
intombazana encinci ifunyenwe ihlala neenkawu
ubudala bamatikiti e-ultron amc
ngumntwana wokungcakaza kwiMartian
Ngaba uBill nye uyisidenge
enoch ngaphaya kodonga lwegadi